Ibraahim Ra’iisi ayaa ku guuleystay doorashooyinka madaxtnimada ee wadanka Iiraan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Ibraahim Ra’iisi ayaa ku guuleystay doorashooyinka madaxtnimada ee wadanka Iiraan.
On Jun 19, 2021 267 0
Guddiga doorashooyinka wadanka Iiraan ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta doorashada madaxtnimada ee wadanka Iiraan, taasoo maalmihii lasoo dhaafay socotay.
Musharaxa ka socday xisbiga muxaafidka ah laguna magacaabo Ibraahim Ra’iisi ayaa ku guuleystay tirinta codadka, wuxuuna heley 62% tirada guud ee dadka codadkooda dhiibtay.
Shir jaraa’id oo uu qabtay madaxa gudiga doorashooyinka madaxtnimada ee wadanka Iiraan ayuu ku sheegay in Ibraahim Ra’iisi uu heley codadka kudhawaad 18 malyan, sidaasna uu ku noqday madaxweynaha wadanka Iiraan, halka raggii la tartamayay qofka kusoo xigay uu heley 3 Malyan waana musharrax Muxsin Ridaa’i.
Musharrixiinta la loolameysay Ibraahim Ra’iisi ayaa ugu hambalyeeyay guusha uu ka gaaray doorashooyinka, madaxweynaha muda xileedkiisu dhamaaday ee Xasan Ruuxaani ayaa isagana shaaca ka qaaday in wareegii koowaadba lagu kala baxay, balse wuxuu afkiisa ka ilaaliyay inuu ku dhawaaqo musharraxa ku guuleystay doorashada.
Masuulkan Iiraaniga ah ee kusoo baxay doorashada madaxtnimada ee wadankaas ayaa kamid ah masuuliyiinta sar sare ee xaga garsoorka wadanka Iiraan, waxaana saaran cunaqabateyn dhaqaale oo ay kusoo rogtay dowladda Maraykanka, waxaan lagu tiriyaa shakhsiyaadka heysta taageerada ciidanka ilaalinta kacaanka, isagoona aad ugu dhow hogaamiyaha ruuxiga ah ee shiicada Iiraan Aayatullaah Khumeyni.